တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Anserineae - ဝီကီပီးဒီးယား
မျိုးဇာတ်: Anserineae [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
ဝီကီပီးဒီးယားတွင် en:Anserineae အကြောင်း ဆောင်းပါးမရှိသေးပါ။ ဖန်တီးရေးသားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်လက်ရှိ ကြည့်ရှုနေသော စာမျက်နှာတွင် en:Anserineae ၏ သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြင်း အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.
Parent: Chenopodioideae [Taxonomy; edit]
Rank: tribus (မျိုးဇာတ် အဖြစ် ပြသသည်)
Parent's taxonomic references: "A novel phylogeny-based generic classification for Chenopodium sensu lato, andatribal rearrangement of Chenopodioideae (Chenopodiaceae)" (2012). Willdenowia 42 (1): 5–24. doi:10.3372/wi.42.42101. ISSN 0511-9618.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Anserineae&oldid=560851" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။